सीमा विवादमा सांसदबीच नै चर्काचर्की – erupse.com
शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा सीमा समस्याबारे छलफल हुँदै थियो । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद भीम रावल र समाजवादी पार्टीकी सरिताकुमारी गिरीबीच सीमा समस्या बहसबारे देशभित्र र देश बाहिर उठेका प्रसंगलाई लिएर केहीबेर चर्काचर्की पर्यो ।
सांसदहरुबीचको चर्काचर्की यस्तो रह्यो
सीमामा पर्खाल लगाउन सुझाव
सांसदहरुले सीमा समस्या समाधान गर्नका लागि थरी थरीका सुझाव दिएका छन् ।
सांसद अग्नि सापकोटाले संविधानमा भएको नक्सा नै त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै संविधान संशोधनको माग गरे । ‘संविधानमा भएको नक्सा नै त्रुटिपूर्ण छ । संविधान संशोधन गरेर नक्सा सच्याउने र कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउने विषयलाई राज्यले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ’ उनले भने ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाशमान सिंहले सरकारले सीमा समस्यालाई हल्का फुल्का रुपमा लिएको आरोप लगाए । सांसद सिंहले भने, ‘सरकारले कुटनीतिक र राजनीतिक प्रयास गरेको छ ? केही काम गरेको छ ? उठाइहाल्यो अब भइहाल्छ भनेर हल्का फूल्का रुपमा लिइरहेको छ ।’
अर्का सांसद मोहन बानियाँले सीमामा पर्खाल लगाउन सरकारलाई सुझाव दिए । ‘कि छिमेकी सुध्रन पर्‍यो होइन भने सरकारले सीमामा पर्खाल लगाउनुपर्‍यो’ उनले भने ।
सांसद उमादेवी रेग्मीले कहिले सचिवस्तरीय वार्ता गर्ने भनेर पन्छाइदिने, कहिले के भनेर पन्छाइदिने काम भइरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गरिन् । ‘यति धेरै म्यान्डेट पाउँदा पनि सरकार किन खुट्टा कमाइरहेको छ ? उनले प्रश्न गरिन् ।